Environment – Page 20 – The Ulwazi Programme
Abantu banezinkolelo eziningi ezingafani ngezinyoka ezahlukahlukene. Kukhona abantu abazisebenzisela ukwelapha okungaba ukusebenzisa izingxenye zayo noma ukuyigcina ngoba benenkolelo yokuthi ibanika amandla noma iyidlozi kubona. ENingizimu Afrika umthetho awuvumi ukuthi abantu bafuye izinhlobo ezithile zezinyoka njengomonyo nezinye. Sizobheka izinhlobo ezithile nezinkolelo zabantu ngazo njengomonyo, inhlwathi nobhulube. Contents 1 Umonyo 2 Inhlwathi 3 Ubhulube 4 English Summary: … Read more
Izindlela Zokunqamula Imvula Enkulu
Ngezikhathi zakudala kwakuba khona izimvula ezazinetha ngamandla zinethe isikhathi eside uma kuqhathaniswa nesikhathi sanamuhla. Phela uma imvula isinetha isikhathi eside abalimi babengakwazi ukuthi balime nempilo yayingaqhubeki kahle. Kuthi uma ngabe sebelimile izitshalo zabo zazonakala noma zimuke namanzi. Kuthiwa izimvula lezo azifani nalezi zanamhlanje kwakuba imvula enamandla futhi ehambisana nezikhukhula noma iziphepho. Kuqala abantu babakhe ngodaka … Read more
Categories Environment Tags Home, Ikhaya, Indlela yokuphila, Izinkolelo zesintu, Living environment, Traditional Beliefs
Inhlaba umuthi obabayo wasehlane lona phela omunye wemithi ekhona kulelizwe esilakhele obaluleke kakhulu. Phela umphilisi lona ongathikameziswa isimo sezulu omila uhlale unyaka wonke. Awufani nezinye izihlahla ngoba uyaphilisa isihlahla sokuphila. InhlabaEmakhaya lesi sitshalo sisiza ezintweni ezahlukahlukene ngenxa yosizo lwaso olubalulekile. Uma izinkukhu zinomkhuhlanyana ziye ziphuziswe lesi sitshalo; emva kokuphuza ziphenduka imiqemane asize umasiza. Uma ulungiselela … Read more
Categories Environment Tags indigenous plants, Izitshalo ezelaphayo, Izitshalo zemvelo, Medicinal plants
Izinkolelo ngokwenziwa ngabantu
Ukuhlukaniswa kwabantu ababili abakhulelwe ekhaya Kuqala obaba mkhulu babeba nesithembu kwakuthi uma kuzwakala ukuthi bobabili noma bobathathu omama bakhulelwe kudingeke ukuthi bahlukaniswe ngezindawo zokuhlala. Lokhu kwakwenziwa uma kuwukuthi bonke bahlala ndawonye noma egcekeni elilodwa babehlukaniswa bahanjiswe ezihlotsheni ngoba kwakubalekelwa ukuthi uma behleli ndawonye ezinye zezingane zabo ngeke ziphile. Uyedwa owayesala ekhaya laba abanye babevakashelwa ngubaba … Read more
Categories Environment Tags Ekhaya, Home
Izindlela Zokulima Nemfuyo, Sibusisiwe High School
Ukulima nemfuyo Kuqala izulu lalina futhi laliguqubala kakhulu izulu. Umsebenzi wokulima abantu abaningi baweyamanisa nabantu besifazane kodwa ezikhathini zakudala kwakubalulekile ukuthi umnumzane wekhaya aye ensimini yakwakhe kuthi abantu besifazane bona basale ekhaya noma basize kodwa kube nguye obaholayo. Nemfuyo yayidlala indima enkulu ezimpilweni zabantu emphakathini. Babefuyile izinkomo, amagusha kanye nezimbuzi abanye nezinkukhu. Izinkomo zazisetshenziswa ekulimeni … Read more
Categories Environment Tags Agriculture, Animals, Crops, Ezolimo, Izilwane, Okulinywayo, Sibusisiwe High School
Isiqunga uhlobo lotshani olusetshenziswa kakhulu abantu abangamaZulu labo abakholelwa emadlozini. Isiqunga siyazimilela emahlathini nasezindaweni ezingamagquma nemihosha. Isiqunga utshani obukhula bubebude, nesidumbu esikhulu buyahaya uma ubuthinta, sinephunga elimnandi uma sesikhiwe. Umsebenzi wesiqunga omkhulu ukugeza. Isiqunga sisusa amathunzi amnyama kanye namabhadi. Isiqunga sisethenziswa ekhaya uma kushoniwe, sikhiwa nezimpande zaso siyagxotshwa bese sihlanganiswa namanzi, lawomanzi yiwo ekugezwa ngawo … Read more
Categories Environment Tags indigenous plants, Izinkolelo zesintu, Izitshalo ezelaphayo, Izitshalo zemvelo, Medicinal plants, Traditional Beliefs